विप्लवको ताजा अन्तरवार्ताः शान्तिपूर्ण कार्यक्रम रोके केपी-प्रचण्डका कार्यक्रम पनि चल्न सक्ने छैनन् — onlinedabali.com
गत मङ्सिर ८ गते पार्टीको आयोजनामा भव्य एवम् सानदार जनप्रदर्शन र जनसभा गर्नुभयो । राज्यले भीषण दमन गर्दागर्दै पनि यसरी ठूलो सङ्ख्यामा जनताको सहभागिता हुनुको कारण के हो ?
यसको पहिलो कारण त हाम्रो पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, सदस्य कमरेडहरूले जनता र देशका पक्षमा अथक रूपमा गरिरहनुभएको इमानदारीपूर्ण मेहनत हो । दोस्रो कारण आम जनता वर्तमान दलाल पुँजीवादी सत्तासँग सहमत छैनन् भन्ने हो । तेस्रो कारण कम्युनिस्ट भनिने सामाजिक दलाल पूँजीवादी सरकारले जनता र देशको हितमा काम गरिरहेको छैन र जनता यससँग पनि खुसी छैनन् भन्ने हो । चौथो, जनता हाम्रो पार्टीले अगाडि सारेको दलाल पुँजीवादी सत्ताको सट्टा वैज्ञानिक समाजवादी राज्यसत्ता र एकीकृत जनक्रान्तिसँग सहमति राख्छन् भन्ने हो । यी यस्ता कारणहरू हुन् जसले पार्टी पुनर्गठन दिवस भव्य रूपले सम्पन्न भयो ।
दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बन्दा पनि यो राज्यले जनताका पक्षमा कुनै काम गर्न नसक्ने मात्र होइन, दिनदिनै बदनाम भइराखेको छ । यसलाई कसरी हेरिराख्नुभएको छ ?
ठीक भन्नुभयो । संसदमा कुन पार्टीले कति सिट जित्यो, बहुमत कसको भयो, कस्तो बहुमत भयो भन्नेद्वारा जनता र देशका पक्षमा काम हुने–नहुने फैसला हुँदैन । यो कुन वर्गको सत्ता हो र यसले कसको हित र सेवामा काम गर्छ भन्ने कुरा मुख्य हुन्छ । सत्ताले जहिले पनि आफूभन्दा माथि वर्गस्वार्थलाई राखेको हुन्छ । नेपालमा श्रमिक वर्गीय सत्ता वैज्ञानिक समाजवाद नभएपछि यसले जनता र देशको हितमा काम गर्ने त कल्पनै भएन । यो प्रगतिशील पुँजीपति वर्गको सत्ता पनि नभएपछि पुँजीवादी सत्ताले जति सुधारको काम पनि जनताका पक्षमा गर्न नसक्ने भयो । यो दलाल पुँजीपति वर्गको सत्ता हुनुका कारण यसले साम्राज्यवादी शक्तिहरूको स्वार्थअनुकूल काम गर्नुपर्छ भने नेपालमा उनीहरूका जुठोपुरो चाट्ने दलालहरूको हितमा काम गर्नुपर्छ । त्यसको परिणाम यस्तै हुन्छ ।
पुनर्स्थापित संसदीय व्यवस्था फेरि विफल भएको अवस्थामा पार्टीले के सोचिरहेको छ ?
सही भन्नुभयो । केही समययता पश्चिमा शक्तिहरूको हस्तक्षेप र प्रभाव देशमा बढेको छ । तर यो एकदमै नयाँ होइन । यसलाई साम्राज्यवादी—उत्तरसाम्राज्यवादी शक्तिहरूको आपसी खिचातानीको सार्वभौमिक आयाम मान्न सकिन्छ । पुँजीपति वर्ग विश्व–पुँजीवादी व्यवस्थाको नेता भए पनि यही वर्गभित्रैका विभिन्न समूहहरू बजार नियन्त्रण र मुनाफा कुम्ल्याउने सङ्घर्षमा दुस्मनीपूर्ण प्रतिस्पर्धा गरिरहन्छन् । नेपाल हालसम्म पनि विभिन्न पुँजीवादी तत्वहरूको प्रतिस्पर्धा गर्ने र प्रभाव बढाउने स्थल बनेको छ । पश्चिमा हाबी भएजस्तो देखिनुमा समकालीन विश्वराजनीतिमा नेपालको सामरिक महत्व बढ्नु हो । चीन र भारत यसका कारणमा छन् । यद्यपि नेपालको प्राकृतिक सम्पदा पनि यसको कारणमा छ ।
देशमा वैदेशिक हस्तक्षेप र देशीय प्रतिक्रियावादीहरूको साँठगाँठमा अर्को प्रतिगमन हुने सम्भावना भनिन्छ, के देख्नुभएको छ ?
विभिन्न क्रान्तिकारी पार्टीहरूका बीचमा एकताको प्रयास गरिरहनुभएको छ भनिन्छ, यसका बारेमा बताइदिनुस् न ?
हो, हाम्रो पर्टीले सबै क्रान्तिकारीहरूसँग चाहे पार्टी होऊन्, चाहे व्यक्तिसँग एकता गर्ने नीति लिएको छ र दिन–प्रतिदिन भई पनि राखेको छ । हालैका दिनमा निकै महत्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू कमरेड दीर्घ पाण्डे, कमरेड नरबहादुर कार्कीलगायतसँग एकता भयो । कैयौँ क्रान्तिकारीहरूसँग छलफल चलिरहेको छ । जसले दलाल पुँजीवादी सत्ताविरुद्ध विद्रोह गर्न आफूलाई तयार गर्नुभएको छ, उहाँहरुसँग एकता भइरहेको छ र हुुँदै जानेछ ।
हाम्रो विशेष आग्रह छ– सबै क्रान्तिकारीहरू एकताबद्ध बनौँ । नेकपा (एमाले—माके) भित्रका इमानदार कमरेडहरूले पनि यसबारेमा सोच्नुपर्छ । जहाँसम्म संस्थागत ढङ्गले एकताको कुरा हो क्रान्तिकारी माओवादी, माओवादी केन्द्र, नेकपा (ऋषि कट्टेलले नेतृत्व गर्नुभएको) जस्ता पार्टीहरूका बीचमा पार्टीएकताबारे छलफल भइरहेको छ तर टुङ्गो लागेको छैन । एकताका पक्षमा वातावरण बनाउन संयुक्त मोर्चामा भए पनि काम गरौँ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण छ ।
केपी—प्रचण्डहरूले कम्युनिस्टहरूको बदनाम गरिरहेका छन् भनिरहनु भएको छ, यस्तो स्थितिमा उनीहरूको प्रतिवाद कसरी गर्ने सोच्नुभएको छ ?
सरकारले वार्ता टोली बनायो तर तपाईंहरूले वास्तै गर्नुभएन भन्ने छ नि ?
यो एकदमै भ्रामक र दुर्नियतपूर्ण प्रचार हो । सरकारले विभिन्न सञ्चारमाध्यम र मञ्चहरूमा वार्ताको हल्ला मच्चायो, अमूर्त वार्ताको प्रचार गर्यो तर हामीलाई वार्ताबारे कुनै पनि आधिकारिक एवम् जिम्मेवारीपूर्ण जानकारी छैन ।
सरकारले फेरि प्रवक्ता प्रकाण्ड, जीवन्तलगायत नेतालाई वारेन्ट गरिएको छ भने गिरफ्तारी पनि सुरु गरेको छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
काङ्ग्रेस, राप्रपालगायत पार्टीले सरकारको असफलतलाई कम्युनिस्टकै असफलता भन्दै हिँडेका छन् नि ?
यो जनतालाई भ्रमित पार्ने प्रचार हो । न केपी—प्रचण्डहरू कम्युनिस्ट हन्, न त उनीहरूको असफलता नै कम्युनिस्टहरूको असफलता हो । केपी—प्रचण्डहरू भनेका त क्रान्ति गर्न सकिँदैन, पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थामै सरकारसम्म बनाएर पुँजीवादीकै सेवा गर्छौं भनेर आत्मसमर्पण गर्न पुगेका विचलित तत्वहरू हुन् । संशोधनवाद भनेको पुँजीवादी सत्ताकै एक भाग हो । जहाँसम्म उनीहरूको असफलताको कुरा छ त्यो सरकारको मात्र असफलता होइन, अपितु दलाल पुँजीवादी सत्ताकै असफलता हो । यो सत्ता रहेसम्म जो सरकारमा गए पनि यस्तै हुने हो । काङ्ग्रेस पनि असफल भइसकेको पार्टी होइन र ! परिवर्तन सरकारको होइन, सत्ताको आवश्यकता छ । जनताले यो बुझ्नुपर्छ ।
यो धेरै चिन्ताको विषय हो । मध्ययुगको अन्त्यदेखि उन्नाईसौँ शताब्दीसम्म जनताले दुत्कारेको धर्मको विषयलाई नेपालमा आज जनता विभाजित पार्ने र भिडाउने खेलमा प्रयोग गरिँदैछ । धर्म भनेको जनतामाथि शोषण र शासन गर्ने हतियार हो । शासकहरूले आफ्नो अत्याचार, उत्पीडन र दमनलाई सही साबित गर्न, आफूलाई भगवान्को दूत बताएर जनतामाथि अमानवीय लूट मच्चाउन प्रयोग गरेको हतियार हो धर्म । अत्यधिक श्रमिक जनताको भाग्य भत्केको देखाएर आफूलाई भाग्यमानी देखाउन शासकहरूले धर्मलाई प्रयोग गरे । धर्म जुनसुकै होस् सबै एकै हुन् ।
हिन्दु, क्रिस्चियन, मुस्लिम, बौद्ध सबैको एउटै सार हो– भगवान्, प्रभु, अल्लाह देखाएर जनतालाई लुट्ने । विडम्बनाको कुरा के भयो भने कम्युनिस्ट भन्ने केपी प्रचण्डहरूले क्रिस्चियनलाई प्रोत्साहन दिन अर्बौं रुपैयाँमा आफूलाई बेचेका छन् । यहाँ हिन्दुको सट्टा क्रिस्चियन भएर के हुन्छ ? के युरोपलाई मध्ययुगमा पोपको गिर्जाघरले जङ्गली, दानवी शासन गरेको होइन ? पोप र पादरीहरूलाई जनताले लखेटेर राजनीति गर्न नपाउने बनाएर थन्क्याइदिएका होइनन् ? अनि नेपालमा यी आएर के नयाँ हुन्छ ! ब्रह्मा, विष्णु र रामले नपुगेर जनता ठग्न ईशु ल्याइरहेका छैनन् ! यो सब दलाल पुँजीपतिवर्गले आफ्नो राज चलाउन चालिरहेका झेल हुन् । हामीले जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्छ– धर्म, भागवान्, ईश्वर सब नभएका झूट, बकबास र कल्पना हुन् । यी जनताको दिमाग समाप्त पार्ने विष हुन् । यसको भ्रममा पर्नु हुँदैन । हामीले ज्ञान र विज्ञानमा विश्वास गर्नुपर्छ ।